Ukulungiselela Isampula LikaMicrotiter Plate Mass - Hielscher
Amapuleti amaMicrotiter, amapuleti ahlukahlukene, amapuleti angama-96-kahle noma amapuleti e-ELISA asetshenziselwa ukulinywa kwesampula nokucubungula amasampula ezinto eziphilayo. Nge-microtiter plate ultrasonicator i-UIP400MTP, i-Hielscher inikeza isisombululo esiyingqayizivele se-ultrasonic sokulungiswa kwesampula okufana nokuthembekile kwamapuleti angama-96. Izicelo ezijwayelekile ze-microtiter ultrasonicator UIP4000MTP zifaka i-cell lysis, isizinda samaprotheni, i-homogenization yeseli nokuxazulula amandla kanye nokuhlukaniswa kwe-DNA.
Ukulungiselela Isampula Elikhulu nge-Ultrasonicator UIP400MTP
Amapuleti amaMicrotiter kanye namapuleti angama-96-well angamathuluzi okuphatha kanyekanye ukucubungula inani elikhulu lamasampuli. Njengoba igama layo “ipuleti elingama-96” selivele likhombisa, amapuleti amancane anemithombo engama-96 futhi angabamba amasampula angama-96 ngamanye. Ukulungiselelwa kwesampula ngaphambi kokuhlaziywa, isb ngaphambi kokuhlolwa okwenziwe ngamaseli (njenge-ELISA noma i-PCR) kudinga i-cell lysis, ukuphazanyiswa kwamaseli kanye nokukhishwa kwamaprotheni nokukhipha amanye ama-molecule we-intracellular aqondisiwe. I-Ultrasonic cell lysis kanye nesizinda kuyindlela yesikhathi eside futhi esungulwe kahle yokulungiselela isampula esezingeni eliphakeme. I-Ultrasonic cell lysis kanye nokukhishwa kwamaprotheni kwenziwa ngokuya ngamaphrothokholi futhi kunikeza imiphumela ephindaphindekayo nethembekile. I-mass-sample i-ultrasonicator UIP400MTP iyi-400 watts enamandla ye-ultrasonic system ehlanganisa amagagasi e-ultrasonic ngokungaqondile ngezindonga zamapuleti amaningi angena kusampula medium. Imithombo yesampula engu-96 ngayinye yenzelwe umfutho ofanayo we-ultrasonic okuholela ekukhiqizeni okuphezulu kweseli nokukhipha.
Izinzuzo ze-UIP400MTP MassSample Ultrasonicator
I-sonication engafaniyo yamasampuli angama-96
Ukulungiswa kwesampula ngesikhathi esisodwa
Imingcele ye-sonication elawulwa kahle (ubukhulu, ubude, umjikelezo, izinga lokushisa)
Imiphumela ephinda izalwe, ephindaphindwayo
I-UIP400MTP ye-sonication engaqondile, kepha enamandla kakhulu yamapuleti emithombo emincane.
Ukulawulwa Kokushisa Okuqondile Ngesikhathi seMicrotiter Plate Sonication
I-UIP400MTP iyi-400 watts ultrasonicator enamandla, edlulisa amagagasi e-ultrasound nokudlidliza ngokungaqondile ngezindonga zepuleti le-microtiter kumasampula futhi kudala amabutho e-cavitation nawokugunda phakathi. Njengazo zonke izindlela zokuphazanyiswa kwamangqamuzana, i-sonication idala ukushisa. Kodwa-ke, ngokungafani nezinye izindlela zokuphazanyiswa kwamangqamuzana, i-UIP400MTP ivumela ukutadisha okuyinkimbinkimbi nokusetha ngaphambili kwemikhawulo yokushisa ukuvimbela noma yikuphi ukonakala okushisayo kwamasampuli ezinto eziphilayo.
I-UIP400MTP ifakwe isoftware ehlakaniphile. Nge-digital touch screen, imenyu ingafinyeleleka kalula ukusetha kusengaphambili imingcele kanye nokuhlela ukufakwa kwamandla okuphelele kwesampula yakho.
Ukuqapha ukushisa kwesampula: IMultiSample Ultrasonicator UIP400MTP ifakwe isoftware ehlakaniphile nenzwa yokushisa engaxhuma. Xhuma inzwa yokushisa ku-UIP400MTP bese ufaka ichopho lenzwa yokushisa komunye wemithombo ye-microtiter. Nge-digital-touch touch-display, ungasetha kumenyu ye-UIP400MTP ibanga elithile lokushisa le-sonication yakho yesampula. I-ultrasonicator izoma ngokuzenzakalela lapho kufinyelela izinga lokushisa okuphezulu futhi imise isikhashana kuze kube yilapho izinga lokushisa lesampula lehla kunani eliphansi lokushisa okusethiwe ∆. Ngemuva kwalokho i-sonication iqala ngokuzenzekelayo futhi. Lesi sici esihlakaniphile sivimbela ukonakala okubangelwa ukushisa.
Uma kunokwenzeka, ungahle upholise ngaphambili ipuleti le-microtiter namasampuli alo ukuhlehlisa ukufika kumkhawulo wokushisa obucayi.
I-UIP400MTP yepuleti le-microtiter / 96-well plate sonication
Amakhasimende emhlabeni wonke asebenzisa i-Hielscher UIP400MTP ukulungiselela okunokwethenjelwa, okuzalayo futhi okulula kwamasampuli amaningi ngobuningi bamapuleti amaningi. I-UIP400MTP isiza umsebenzi wazo wansuku zonke kuma-biological biochemical, biochemical, life science, laboratories yezokwelapha neyemitholampilo. Nge-software ehlakaniphile nokulawulwa kwamazinga okushisa kwe-Hielscher UIP400MTP, izinga lokushisa lilawulwa ngokuthembekile nokucekelwa phansi kwesampula okubangelwa ukushisa. Ukulungiselela isampula ye-Ultrasonic nge-Hielscher Ultrasonics 'UIP400MTP iletha imiphumela ethembeke kakhulu futhi ekhiqizwayo!
Cela iphakethe lakho lemininingwane yamahhala kufaka phakathi izinhlelo zokusebenza kanye nentengo ye-UIP400MTP ukugcwalisa ifomu elingezansi noma ukuxhumana nathi nge-imeyili noma ngocingo namuhla!
Ufuna uhlelo lwe-ultrasonic ukucubungula amavolumu aphezulu? Ithebula elingezansi linikeza isibonakaliso somthamo wokucubungula we-ultrasonicators wethu:
I-UIP400MTP ye-microtiter plate / i-sonication yamapuleti amaningi
Ayini ama-Microtiter Plates?
Amapuleti amaMicrotiter, aziwa nangokuthi amapuleti angama-96-well, ama-microplate angama-96-well, amapuleti anama-multi-well noma ama-ELISA plate, angamapuleti ama-multi-well angunxande, asetshenziswa kakhulu kumalabhorethri ukucubungula amaseli akhulile, amasampula amaselula. Amapuleti amaMicrotiter asetshenziswa kakhulu ekuhlolweni okuhlukahlukene okufana ne-ELISA ne-PCR. Iningi lamapuleti angama-96 aklanyelwe ukugeleza kokusebenza okuphezulu kwe-throuput futhi ayahambisana nezinsimbi zokuhlaziya nokuphathwa nokucutshungulwa kwerobhothi. Ngakho-ke ukwahlukahluka okuningi okufana namapuleti ashibilikiswe ngokuphelele afanele amapulatifomu amarobhothi, amapuleti angenaziketi, amasiketi amancane, namabhakhodi aguqulelwe ukucutshungulwa kwesampula ngobuningi ayatholakala.
Ukusetshenziswa okujwayelekile kwamacwecwe ama-microtiter kufaka phakathi izinhlelo ezifana nokuqoqwa kwesampula, ukulungiswa kwamakhemikhali, i-cheminatorial chemistry, ukuhlolwa okuphezulu kwe-throughput, ukuhlanzwa kwe-nucleic acid, ukukhula kwesiko lama-bacterial, nokuphindaphindeka kwamapuleti.